Iphrofayela avaliwe "Ofunda nabo": kanjani ukuze uyivule? Buka izithombe ku-iphrofayela avaliwe nokugenca
Namuhla sizobe ukukhuluma nawe ngenkinga othole ukusabalala World Wide Web. Okungukuthi, inkinga ingase ibe kanje: "Vala iphrofayela ku" Ofunda nabo "- indlela ukuvula?" Kuyinto izinto eziyimfihlo futhi sizozama ukuqonda namuhla, abe anaka yokuxhumana eshiwo ngenhla. Eqinisweni, kulula kuhle. Ikakhulukazi uma wazi kuphi futhi kulokho ukuze cindezela.
Nokho, into yokuqala okufanele uqale ikhambi lenkinga yethu - kuba ukugunyazwa yokuxhumana. Phela, ngaphandle kwalo ngeke isebenze ukuthola indlela ukuvula iphrofayela avaliwe. Plus, kufanele sikhumbule ukuthi zonke manipulations eyenziwa yithi namuhla kuyoba efanele kuphela amaphrofayli zethu. Nge omunye lokhu angeke kusebenze.
Uma ukhathazekile ngenkinga: "ngavala Iphrofayili ku" Ofunda nabo "- indlela ukuvula?" - siqala vakashela ikhasi le-yokuxhumana, bese ufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Ukulungele? Ngakho ufanele lephrofayela yakho. Lapha kungenzeka ukuba nizifeze zonke izilungiselelo ezidingekayo ukuze ngathi, kuhlanganise evulekile / ukuvala iphrofayli ukwabelana. Kodwa lokhu kwenziwa kanjani? Kulula kabi. Kepha manje siyakuthi izophenya le ezibonakala nzima, umbuzo. Into esemqoka - ungesabi futhi bethukile, ukuthi akukho lutho ezingelapheka.
Esly wena kwabuzwa lo mbuzo: "? - indlela ukuvula" "Vala iphrofayela ku" Ofunda nabo - bese uyazama ukusebenza kancane nge izilungiselelo iphrofayela yakho. Akunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala.
Uma usuqede inqubo ukugunyazwa, sibukisise ilebula ngaphansi avatar yakho. Lapho, chofoza ku umugqa "ngaphezulu" bese ukhetha "Hlela izilungiselelo." Manje uzobona uhlu omkhulu lezinyathelo ezingenzeka. Khona-ke sizoba ukusebenza esikhathini esizayo.
Ukuze, isibonelo, ukuvala sephrofayela, kukhona umsebenzi ehlukile. Ibizwa ngokuthi. Phawula kuzilungiselelo Kulula kakhulu futhi elula. Kodwa nge ukuvulwa - ezahlukene zonke kancane. Uma ucabanga ngesihloko esithi: "? - indlela ukuvula" "Vala iphrofayela ku" Ofunda nabo - ke unake iyona "Izilungiselelo zomphakathi". Masizame siyiqonde ukuthi iyini.
Yiqiniso, ukuphendula umbuzo wethu namuhla, siyoba basebenze izilungiselelo zobumfihlo kancane. Noma, njengoba sekushiwo, ngalokho okuthandwa nguye yomphakathi. Chofoza kulo mugqa futhi ubone ukuthi kuzodingeka for imenyu.
Kube azoboniswa zonke kungenzeka izinketho zokufinyelela. Ungalungisa ubumfihlo, amaphrofayli ukubonisa, nokunye. Uma ungafuni ukukhombisa wonke umuntu iminyaka yakho noma, isibonelo, isimo somshado, ungalungiselela isibonisi ezifanele. Ukuvula iphrofayli umane ufake kukho "okwabiwe" phambi into ngayinye uboniswa izilungiselelo zomphakathi. Okulandelayo - ukulondoloza izinguquko futhi ujabulele imiphumela.
Njengoba ubona, ukuze uphendule lo mbuzo: "Vala iphrofayela ku" Ofunda nabo "- indlela ukuvula?" - ngempela kulula. Nokho, manje sizoxoxa nawe ambalwa amaphuzu kubaluleke kakhulu ukuthi ingasho okusekelwe kuwo isihloko sethu namuhla. Ngokwesibonelo, ukuthi kusetshenziswe kanjani ngokubuka izithombe kusuka iphrofayli avaliwe. Kaningi-ke ingumfanekiso + "izithombe" ukusiphoqa ukuba sibheke Amakhasi zabanye abantu ekuxhumaneni nomphakathi.
Sizoqala nawe lowo mbono amaphrofayli yangasese, ikakhulukazi ezinye izakhi zabo ngamunye, izindlela ngokwethembeka nje akunakwenzeka. Bese kudingeka ucabange indlela zokulungisa isimo. Ngenhlanhla, Inthanethi lanamuhla nezwi ezigcwele zonke izinhlobo izimfihlo ezisiza "ukuthola" ikhasi lomunye umunt wokubuka akho.
Okuvame kakhulu nephephile indlela lapha - ukusetshenziswa anonymizer. Ngalo, kuzomele uvakashele iphrofayili "Odnoklassniki" ubone konke oyithandayo. Ngeshwa, le simo ayisekho ezingasho ukwenza. Phela, ukuphepha kanye nobuqotho idatha yomuntu siqu - lokhu kuyinto okufanele isiqinisekiso noma iyiphi ingosi yokuxhumana nabantu.
Futhi uma abasebenzisi siqale ukucabanga indlela Hack iphrofayela ku "Ofunda nabo". Ake ngokudingayo siyobese sizame ukuba baqonde indlela ukusebenzisa imibono. Futhi kuze kufike lokhu.
Nokho, inkinga nokugenca Amakhasi zabanye abantu ekuxhumaneni nomphakathi njengamanje kuyingozi kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, abantu bafuna ukwazi ukuthi yini namasu asetshenziswa imikhonyovu. Masizame bazivikele emibi engase esiyozithola.
Iphuzu lokuqala okumele kunakwe - ukuthi nokugenca akhawunti, ngokuvamile kwenzeka emva kokufakwa kwezicelo ezikhethekile ezithi ukunweba amakhono zokuxhumana. Lokhu kunjalo njalo kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, uma isicelo zezinkampani zangaphandle noma isofthiwe (indawo) udinga ukuthi okokufaka iphasiwedi yakho negama lomsebenzisi emakhasini kwezenhlalo, qaphela - kuba nguqulo nokugenca yesibili. Umane ukuyengela ulwazi lomuntu siqu ubuqiniso. Ngomqondo onabile, yimuphi umsebenzisi yesimanje ingaze umkhonyovu. Qaphela on the Internet!
Kungani ngingakwazi ukuvula ingxabano ku "Aliekspress"?
Ikhaya nehhovisi LAN nge-Wi Fi
Kuyini anonymizer? Indlela uvakashele amasayithi avinjiwe futhi ukuxhumana nomphakathi?
Galicia-naseVolyn ubukhulu: indawo. Kumiswa Galicia-naseVolyn ubukhulu
Namafutha best for izingono ngesikhathi ibele
Sibhedlela "Metallurg" (Essentuki): kuzibuyekezo, izintengo